About Us - Jinbiao Ukwakhiwa Izinto Co., Ltd.
Isitayela Somgoqo Womsindo
wemigomo yethu eyinhloko kukhona ukunikeza amakhasimende ethu emhlabeni wonke nge izinga ezinhle, amanani abiza, ukulethwa wanelisekile namasevisi kakhulu. Ukwaneliseka ikhasimende kuyinto mgomo wethu oyinhloko. Siyakwamukela ukuvakashela showroom yethu futhi ehhovisi. Sibheke phambili ukusungula ibhizinisi maqondana nawe.
Hebei Jinbiao Ukwakhiwa Izinto Lusekelwe 1986 onguchwepheshe ukukhiqizwa ukwakhiwa impahla. Kwemboni yethu ithatha ezingaphezu kuka 800,000m2 ndawo, nabasebenzi abangaphezu kuka-400, ochwepheshe 40, inhlokodolobha olubhalisiwe RMB 60.4 million, ukufinyelela yuan ayizigidi ezingu-500 liquidity.In Shijiazhuang, 26 Disemba 2014, inkampani ohlwini phezu exchange stock, eba yenkampani endaweni efakwe kule ndawo, imikhiqizo nazo bhalisiwe igolide anezikhala ejwayelekile, umsindo isithiyo kanye ne-aluminium formwork brand. Ekuqaleni kwawo-90 sika, Jinbiao lidlule ISO9001- 2000 izinga isitifiketi kuhlanganise "AAA izinga grade isitifiketi", "isifundazwe Hebei amabhizinisi oluvelele", "ibhizinisi okuthenjiwe", "ukukhiqizwa ephephile" nezinye isitifiketi udumisa.
Hebei Jinbiao Ukwakhiwa Izinto Tech Corp., Ltd. ukwenza ngaphandle ukukhiqiza kanye nokuthuthukiswa Wire Mesh fencings, izintambo oluhlabayo nemikhiqizo ehlobene ezinze Anping, edumile Wire Mesh Land of China.
Quality Product: Imikhiqizo yethu baye badlula isitifiketi ISO9001 ka ukuphathwa izinga uhlelo, isitifiketi CE umkhiqizo, futhi kusungulwa nokubambisana eside nge Acoustic Institutions eNingizimu-mpumalanga Asia. Ngaphandle JINBIAO omisa izinga ukuhlolwa ithimba akhethekile ayeqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ukufanelekela kahle.
Ukukhiqizwa Umthamo: JINBIAO Inkampani has amafektri 3 kuhlanganise Wire Mesh Fence, Izithiyo Sound and Aluminium formwork. Umthamo ukukhiqizwa Daily ongafinyelela 18km kocingo, 5000 m2 umsindo izithiyo, futhi 8000 PC H steel okuthunyelwe. Aluminium formwork kwaklanywa futhi kwadalwa isikhathi esingaphezu 10 amasethi izakhiwo ngenyanga.
Jinbiao ifakwe lokuthi umisa phezu 80 wokuqala wokuhlola ukukhiqizwa ekilasini kanye R & D imishini ukukhiqiza post square wire anezikhala ocingweni, ashiselwe Wire Mesh roll, chain link kocingo, inkukhu Wire Mesh, imvu / izinkomo / inkambu kocingo, nocingo oluhlabayo futhi umsindo ukubiya ukuze emhlabeni wonke amakhasimende.
Sine ukukhiqizwa ejwayelekile futhi ephelele ukulawula izinga uhlelo ukuqinisekisa imikhiqizo high quality ukuhlangabezana nezidingo amakhasimende ethu '.
Inkampani yethu unqobile idumela elihle eChina sikhipha imikhiqizo emazweni amaningi futhi izifunda.
Izidingo zakho uthango, sicela uxhumane nathi manje!
Ukukhiqizwa C apacity :
JINBIAO Inkampani has amafektri 3 kuhlanganise Wire Mesh Fence, Izithiyo Sound and Aluminium formwork. umthamo ukukhiqizwa Daily ongafinyelela 18km kocingo, 5000 m2 umsindo izithiyo, futhi 8000 PC H steel okuthunyelwe. Aluminium formwork kwaklanywa futhi kwadalwa isikhathi esingaphezu 10 amasethi izakhiwo ngenyanga.
Ukukhiqizwa E quipment :
Inkampani yethu ine engaphezu kuka-10 ukukhiqiza imigqa, kuhlanganise ahlabayo, Welding, eguqa nezinye ezenzakalelayo zokukhiqiza imigqa. Ngo-2016 JINBIAO wachitha kwezigidi ezingu-20 izindodla zemali ukwethula imishini emisha enkulu umkhiqizo ebusweni ukwelashwa spray.
Imikhiqizo yethu ukuthengisa kahle kokubili ekhaya aphesheya kanye quality evelele futhi intengo evumayo. ezifana Russia, Singapore, Dubai, United States, eCanada, e-Australia, eJapane etc ... Futhi unqobile kala izinga nekhwalithi omuhle by oversea amaklayenti, ujabulela idumela eliphezulu embonini.
Umgomo wethu olandelayo ukuze idlule okulindelwe zonke iklayenti ngokunikeza service ovelele ikhasimende, kukhuphuke eguquguqukayo kanye kunani. Sekukonke, ngaphandle amakhasimende ethu thina abekho; ngaphandle amakhasimende bejabule futhi benelisekile ngokugcwele, sisuke sehluleka. Sifuna i-wholesali, Drop umkhumbi. Sicela uxhumane nathi uma ezithakazelisayo imikhiqizo yethu. Ithemba ukwenza ibhizinisi nani nonke. Ikhwalithi ephezulu futhi mpahla okusheshayo!
Kusukela kusungulwe yethu, sigcina ekuthuthukiseni imikhiqizo yethu futhi kwamakhasimende. Siyakwazi ukukunikeza anhlobonhlobo izinga okusezingeni izinwele imikhiqizo ngamanani ukuncintisana. Futhi singakwazi ukukhiqiza imikhiqizo ehlukene izinwele ngokuvumelana amasampula akho. Silwela ku high ngemali ephansi. Ngaphandle kwalokhu, sinikeza engcono OEM inkonzo. Sibamukela ngokufudumele oda OEM kanye namakhasimende emhlabeni wonke ukuthi babambisane nathi ekuthuthukiseni mutual esikhathini esizayo.
Njengamanje yokuthengisa yethu inethiwekhi lukhula njalo, ukwenza ngcono izinga service ukuze banelise izidingo zamakhasimende. Uma unesithakazelo kunoma yiliphi imikhiqizo, sicela uxhumane nathi nganoma yisiphi isikhathi. Sifuna phambili ukwakha ubuhlobo elichumayo nawe esiseduze esizayo.
Sinikeza eziningi ezihlukahlukene imikhiqizo kulo mkhakha. Ngaphandle kwalokho, ama-oda ngezifiso ayatholakala. Yini ngaphezulu, uyojabulela amasevisi wethu omuhle kakhulu. Ngo izwi elilodwa, ukwaneliseka kwakho kuqinisekisiwe. Siyakwamukela ukuvakashela inkampani yethu! Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela eze website.If yethu uneminye imibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
East District, Industrial Park, Anping County, Isifundazwe Hebei, China (No. 27, Weier Road)
Kuqediwe Ngokuphelele — I-Rongwu High-spe ...
Ihholo lombukiso elisha
Imikhiqizo ye-aluminium kaJinbiao